माधव नेपाललाई चिठी - Aaha Sanchar
मिति: २०७८ असार ९, बुधबार
२०७८ बैशाख २२, बुधबार १०:०६
आदरणीय माधव नेपाल ज्यू
स्वागत तथा अभिवादन,
हाम्रो गौरवमय पार्टी ने.क.पा. (एमाले) का वरिष्ठ नेता तपाई नेपालको इतिहासमा ने.क.पा. लाई झल्काएको नेता हुनु हुन्छ । यो हाम्रो कम्यूनिष्ट पार्टीलाई जगै देखि टुप्पा सम्म पार्टी जगेर्ना गर्नु भएको इतिहास सावित छ । तपाई समय र परिस्थिति अनुसार हिडिरहेको भएपनि सडक बिर्से बाटो विराउनु भएको सत्य हो ।
नेपालमा संघीय लोकत्रान्तिक गणतन्त्र प्राप्ति गराएको र कम्यूनिष्ट आन्दोलन २०४६–२०६२–२०६३ को जनक्रान्ति १९ दिने आन्दोलन सफल पार्न लाखांै लाख जनता सडकमा उतार्ने र जंगलमा वास गरेर जनतालाई सताई रहेका माओको खोल ओडेका माओवादीलाई घरमा ल्याएर तातो खाने तातो गरी सुत्ने वनाउने काममा तपाईको ठूलो भूमिका छ । सिङ्गो पार्टीका तर्फबाट बहुदलिय जनवादले तुरुन्त तपाईलाई फिर्ता बोलाई रहेको छ । तपाईहरुलाई बहुदलिय जनवादले सत्तसराप गरी रहेको छ । जुन बाटो तपाई हिडी रहनु भएको छोटो छ । राम्रो खालको मान्छे । लामो वाटो हिड्नु पर्दछ । तपाईलाई जनताले आशा भरोसा गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अहिले पार्टीलाई अंग भङ्ग बनाउनु भएको छ । शान्ति लोकतन्त्रको परिवर्तनलाई जनसमुदायमा पु¥याई उच्चसम्मानका साथ नेपालको संविधान २०७२ लागु गराउने तपाइको पनि मुख्य हात हो ।
तपाई ने.क.पा. (एमाले) को मूलधारको मूलघर धनी हो । तपाई यो कदमले तपाईको ५०–५५ वर्ष सम्म गरेको राजनिती चकनाचुर हुन गैरहेको छ । यो तपाइको राजनितीले समाज कहिले मुक्त हुन सक्ला जस्तो देखिएको छैन । आदरणिय कमरेड हाम्रो पार्टीको क्रान्तिलाई आजको विन्दु सम्म पार्टीलाई यहाँ पु¥याउन योगदान कहाँ र कस्को भन्ने कुरा इतिहास साँक्षी हुन्छ । आफुले वोलेको कुरा गफ हुन्छ । इतिहासले देखाएको हुन्छ । कम्यूनिष्ट पार्टीका महासचिव कमरेड पुस्पलाल जनताको वहुदलिय जनवादको सिद्धान्तका नायक मदन भण्डारीले ठूलो चौतारी रचिराख्नु भएको छ । त्यो चौतारीमा लोकतान्त्रिक कम्यूनिष्ट सवै त्यो भित्र अटाउछौ । तपाई जे जसरी भएपनि तुरुन्त व्यक्ति वादी सोच ब्यक्ति बादी भएका गरेका अफ्ठेरा वाधा अडचन छिचिल्दै आफ्नो पुरानो घरमा फर्कन नेपाली जनताले ठुलो आशा भरोसा गरेका छन् ।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका अग्रज संस्थापक कमरेड पुष्पलालले तयार पार्नु भएको क्रान्तिको रुपरेखालाई उच्च सम्मान गदै तपाई र तपाईका केहि वरिष्ठ नेताहरु (एमाले) को क्रान्तिलाई अधुरो नवनाउन र समाजको परिकल्पना पुरा नभएकोले माक्सवाद लेनिन वादलाई उच्च सम्मान गदै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमाले वहुदलिय जनवादमा फिर्ता आउन हुन अनुरोध गर्दछौ ।
ने.क.पा. एमाले सचिवालय सदस्य, रुकुम पश्चिम
फोटो फिचर मुख्य समाचार
पर्यटकलाई पर्खेका गोतामकोटका गाउँहरु
स्मरणमा रुकुमको अवलोकन
बन्द भित्रौं यात्रा
छाउपडी प्रथामा आधारित फिल्म टालो ट्रेन्डिङ्गमा
दर्शनः धर्मको उत्पत्ति मानिसको अज्ञानताको उपज
ओरेक रुकुमको शिलवन्दी दरभाउ सम्बन्धी सूचना
मिडियाको अवस्थाबारे ‘भर्चुअल’ कार्यक्रम सम्पन्न
कोभिड रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम
राप्ती समाज जापानको तेस्रो अधिवेशन हुँदै
आहा सञ्चार साप्ताहिक ९ वर्षमा प्रवेश (विज्ञप्ति सहित)
२०७८ असार ९, बुधबार १२:३२ आहा सञ्चार
२०७८ असार ८, मंगलवार ०९:५० आहा सञ्चार
२०७८ असार ७, सोमबार १०:३९ आहा सञ्चार
२०७८ असार ६, आईतवार १३:३२ आहा सञ्चार